Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0912 lak
Fanambarana sahady ny fiaviany fanindroany
Alakamisy 29 Nov.
“Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo hianareo mandrapihaviny” - 1 Kôr. 11:26. Inona no fanantenana lehibe aseho eto?
Hitantsika amin’ny alalan’ireo teny ireo fa mifamatotra akaiky tokoa ny fiavian’i Kristy fanindroany sy ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Tena mitombina tokoa izany, satria ny Fiavian’i Jesôsy fanindroany, dia fetra fara tampon’ny toe-javatra niseho teo amin’ny hazo fijaliana mihitsy. Azo atao tsara ny milaza fa ny antony lehibe indrindra nahatongavan’i Krity voalohany teto an-tany, ao anatin’izany ny naharotidrotika ny tenany sy ny nahalatsahan’ny rany ho antsika, dia ny Fiaviany fanindroany. Ny Fiaviany voalohany no efa manomana sahady ny Fiaviany fanindroany.
Inona no tombontsoa azo avy amin’ny fiavian’i Kristy voalohany raha tsy ho avy fanindroany indray Izy?
Azo lazaina ho ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo no elanelana mampifandray an’i Kalvaria sy ny fiavian’i Kristy fanindroany. Isaky ny mandray ny fanasan’ny Tompo isika, dia mibanjina ny Hazo fijaliana sy izay notanterahiny ho antsika. Izay notanterahany ho antsika anefa tsy azo sarahina amin’ny Fiaviany fanindroany. Izany hoe, tsy tonga amin’ny fara tampony ny zavatra nataon’i Jesôsy ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana raha tsy amin’ny Fiaviany fanindroany.
Vakio ny Mat. 26:29. Inona no ambaran’i Jesôsy ao anatin’io andininy tokana io?
Jereo ny teny fikasana sy ny toky ary ny fanantenana atolotry ny Tompo antsika eto. Milaza fahakekezana sy firaisana ety dia ety hatrany amin’ny mandrakizay eo amin’ny avotana sy ny Mpanavotra ireo teny ireo. Manome toky antsika i Jesôsy fa tsy mba hisotro amin’io vokatry ny voaloboka io intsony Izy mandra-piavin’ny andro hiarahany misotro izay vaovao amintsika any amin’ny fanjakana mandrakizay. Rehefa tsaroantsika ny maha-Mpamorona an’izao tontolo rehetra izao Azy (Kôl. 1:16), dia vao mainka mahatalanjona tokoa io teny fikasana io. Ankoatra ny zavatra rehetra tondroin’ny Fandraisana ny fanasan’ny Tompo àry, dia tokony hampitodika antsika any amin’ilay fanantenana lehibe izay miandry antsika amin’ny fiavian’i Jesôsy fanindroany ihany koa izany.
Kivy ve ianao, na ketraka koa? Tonga soa eto amin’ny tontolon’ny fahalavoana. Nahoana no zava-dehibe tokoa ny mibanjina ny Hazo fijaliana sy ny hevitr’izany amin’izao fotoana izao sy amin’ny hoavinao farany, na dia eo aza ny zavatra rehetra mety holalovanao?